Raw 1-Testosterone (Dihydroboldenone) powder Vagadziri & Fekitori
1-Testosterone powder ndomumwe wemasimba anonyanya anabolic emakethe nhasi uye guru testosterone booster uye musisi wemasumbu ayo achaita kuti uve musimba kuoma uye kuwedzera simba.
Raw 1-Testosterone (Dihydroboldenone) powder (65-06-5) video
Raw 1-Testosterone (Dihydroboldenone) powder (65-06-5) tsananguro
Raw 1-Testosterone (Dihydroboldenone) powder kana DHB kwenguva pfupi, inonzi steroid anabolic inopesana ne testosterone nokuva nekombani ye 1,2-mbiri panzvimbo yehutano hweHNUMX-kaviri mukati maro. Iyo yakanyanyisa uyerogen ine vanabolic properties, Chikonzero icho chakakurumbira pakati pevarimi vemuviri uye vanofarira mafambiro ndeyekuti ine zvimwe zvinhu zvakasiyana chaizvo. Iko chaizvoizvo chimiro chakawanikwa kubva pakuitwa synthetic anabolic steroid Boldenone, iyo inonzi androgenic muzvisikwa. Inoedza kuenzanisa migumisiro ye testosterone. Sezvo inonzi metabolite yeBoldenone pachake, inonziwo 4,5-Dihydroboldenone, kunze kweDHB uye 4-testerone. yaitengeswa zviri pamutemo seprohormone muU.SA kusvika 1, apo yakadzorerwa zvakare sechirongwa cheParamende III. Inobatanidzwa senhengo yevanabolic. Iyo an anabolic androgenic steroid, a 2005beta-hydroxy steroid uye 17-oxo-Delta (3) steroid. Ichi chigadziriswa chekutsvakurudza uye kushandiswa kwezvinyorwa.
Raw 1-Testosterone (Dihydroboldenone) powder (65-06-5) Specifications
Product Name Raw 1-Testosterone (Dihydroboldenone) powder
Kemikari Name 1-Testo; 1-T; δ1-Dihydrotestosterone; δ1-DHT;
muchiso Name Hapana zuva rawanikwa
Molecular Wsere 288.42
Kunyorera Point 157-159 ° C
Skukodzera 0.0128 mg / mL
Storage Temperature Zvinhu Zvinodzorwa, -20 ° C Freezer
APane se an anabolic androgenic steroid
Chii chinonzi Raw 1-Testosterone (Dihydroboldenone) powder (65-06-5)?
1-Testosterone powder (dihydroboldenone powder), kana kuti DHB powder kwenguva pfupi, inonzi anabolic steroid inopa migumisiro yakanakisisa kunyanya kune vashandi vemiviri, vanomhanya, uye vanofambisa mabhasikoro. Zvinofadza kuti pasinei nokuti zita racho rinogona kuvhiringidza, hapana nzira iyo DHB testosterone. Muzvokwadi, inongova 5alpha yakaderedza fomu yeEquipoise (boldenone), iyo inoshanda nenzira yakasiyana zvakasiyana. Nokudaro, DHB yakasimba yeanbolic simba inoita kuti steroid ipe mararamiro akavimbika uye akanaka kune zvishoma zvisingabatsiri. Potency uye simba pamwe chete nemigumisiro yesrogenic yakagadzikana ndiwo maitiro ekutanga ekubatanidzwa.
Iyo Raw 1-Testosterone (Dihydroboldenone) powder (65-06-5) mabasa
DTH powder ishomoni inowanzoitika mumuviri wako mushure mokunge testosterone ishanduka. Kungofanana nedzimwe steroid iyo yaimbova mumutumbi wemuviri inoshandura ikaita DTH uye DHB, testosterone inoshandura mu estrogen uye DTH. Iyo mishonga ine minda yakaipa iyo inoita kuti ive yakakosha kune vakawanda vadzidzisi vezvemagetsi. Dihydroboldenone powder inonyanya anabolic zvinoreva kuti inokwanisa kupa miviri miviri yakaonda kune vashandi vayo. Iyo mishonga haina kuwedzera mvura yekuchengetedza mumisungo uye ine zero anromatizing madhara. Zvichienderana nehuwandu hwekushandiswa kwako, chiremba anofanira kukutungamirira mukugadzirisa dhiyo yakakodzera. Kuti igare yakachengeteka, kuongororwa kwezvokurapa kunofanirwa kutanga uye shure kwekupedzisa kutanga kwekutanga. Mitumbi yevanhu inoita zvakasiyana nemishonga yakawanda kuitira kuti steroids, uye naizvozvo kutarisana kwechiremba pedyo kwakakosha kuti zvive nani.
Raw 1-Testosterone (Dihydroboldenone) powder (65-06-5) Dosage
Zvakanakisa kutanga nevanenge vhiki imwe pane imwe nhamba ye 5-10 mg kuona kuti munhu anopindura sei. Vazhinji vashandisi vanoona rutivi urwu kuti rwubudirire, nepo vamwe vanofunga kuti zvakakosha ndeye 20-40 mg. Icho chinouya kune zvakaitika, zvinangwa, uye munhu oga. Vakawanda vanowana mubairo wakaderera kuti uve wakanyatsobudirira semunhu akakwirira, asi ane zvido zvishoma. Nechirongwa chakadai seichi, zvinonyanya kukanganisa kudivi rekunyevera, kunyanya kune avo vasina ruzivo rwakanyanya nema steroid. Vakawanda vanoita sevanowana muto wavo wakanaka kuti uve mu 10-30 mg. Purogiramu yakareba inofanira kuchengetwa pfupi, muhuwandu hwemasvondo e1-4.Pakupedzisira, zvakakosha kunyanya kutora nguva yakakwana mushure mekunge imwe neimwe ichitenderera nechinhu ichi kuti chibvumira muviri kuti uwanezve.
Raw 1-Testosterone (Dihydroboldenone) powder (65-06-5) Benefits
Prohormone Yakabudirira Yakazombogadzirwa
Masimba ane simba uye Vanesimba Masimba
Inowedzera Kuwedzera uye Kuwedzera
DHB inokurudzira musimba kukura uye inovandudza simba rose remuviri. Vatambi vanotora steroid kuti vabatsire mukuvaka musimba hwakasimba uye kuwana simba yekukwikwidzana pamwe nekushanda zvakanaka. Kubva pane kugadziriswa kwevatengi pazvikwata zvakasiyana-siyana, DHB haigumburwi. Vazhinji vashandisi vanotaura kuti kubudirira kwavo mumabasa avo emitambo kune ichi chinodhaka.
Tenga 1-Testosterone (Dihydroboldenone) powder (65-06-5) kubva kuBuasas.com
The Ultimate Guide kwa Dihydroboldenone / DHB yeMuviri wekuvaka
Kazlauskas, R. (2010). Designer steroids. In Kutsemuka muMutambo: Maitiro ezvinyorwa, Maitiro uye kuongororwa(pp. 155-185). Springer, Berlin, Heidelberg.
Anti-Inflammatory, PI (2011). Kuvhiringidzika kweMusikirwo Kukura. Kupisa, 5.
Magdziak, K., Osman, N., Tvaroha, A., Ding, J., & Fagan, JM (2011). Pro-hormones uye Mufananidzo weMuviri: Inguva yakawanda sei?